IZIBONELELO EZI-8 ZEZITYALO ZANGAPHAKATHI -INDLELA IZITYALO EZIYIPHUCULA NGAYO IMPILO YAKHO - IMPILO
Izibonelelo ezi-8 ezisempilweni zezityalo zangaphakathi, ngokweeNgcali zeHorticulture
Eyona / Impilo
Izityalo ziluhlobo lokuba nomzuzwana ngoku. Thatha umqulu okhawulezayo nge-Instagram kwaye uza kubona izinto zangaphakathi ezintle zigqunywe yimidiliya enamagqabi, ukuxhoma izityalo , i-spunky succulents, kunye nemithi ebeka yonke ikona yegumbi.
Kwaye kukho isizathu sokuba wonke umntu athabathekiswe luhlaza: Izityalo zangaphakathi ziphucula impilo yakho yengqondo neyomzimba ngeendlela osenokuba ubungaziqondi. Ukhe uzibuze ukuba kutheni uziva ngathi ungaphefumla lula, ujonge ngcono, kwaye wonwabe kwigumbi eligcwele indalo? Ewe, kuvela ukuba ezi zinto zikhona kudala zikhona ngaphambi kokuxabisa kwethu okubonakala ngathi kukufumana indawo entle. Apha, iingcali zezolimo zichaza njani izityalo zendlu ukuphucula ubomi bethu bemihla ngemihla, ukusuka ekunyuseni okusingqongileyo ukuya kusinceda siphile ngokukhawuleza.
Uphando ibonisa ukuba izityalo zangaphakathi zinceda ukususa umoya weetyhefu eziqhelekileyo kunye nezinto ezingcolisayo zangaphakathi ezifana i-formaldehyde kunye ne-benzene. Ngapha koko, nye ukufunda ifumanise ukuba isityalo se-bromeliad sisuse ngaphezulu kweepesenti ezingama-80 zeekhompawundi ezintandathu ezinokuguquguquka kwezinto eziphilayo eziphilayo (kwezi-8 ezifundwe) kwisithuba seeyure ezili-12, ngelixa isityalo se-dracaena sisuse iipesenti ezingama-94 ze-acetone (ikhompawundi ebabayo kwiindawo ezininzi ezisusa iinzipho).
Ukucoca umoya kwezityalo kuxhomekeke kwizinto ezinje ngobungakanani besityalo, ubungakanani bendawo yangaphakathi, kunye nobungakanani beetyhefu ezisemoyeni, kodwa izityalo ezi-6 ukuya kwezi-8 eziphakathi ukuya kwezikhulu kwigumbi elikhulu kufuneka zanele ukwenza umahluko obonakalayo. kumgangatho womoya, utsho UGary L. Altman , CRC, HTR, umlawuli odibeneyo we Inkqubo yoNyango lweHorticultural e Rutgers . Ukunceda izityalo zenze okusemandleni azo, gcina amagqabi acocekile kwaye engenalo uthuli, kwaye ngamaxesha athile uzise ngaphandle ukuze ufumane ilanga lendalo ukuze 'zihlaziyeke kwakhona.'
THENGA ISITYALA SEBOMELI
2 Benza naliphi na igumbi ukuba likhululeke ngakumbi. IWestend61Imifanekiso kaGetty
Ayizizo kuphela izityalo ezisendlwini ezongeza umbala kunye nokuziyolisa kwindawo yakho, kodwa ziyatshintsha nezinto ezibonakalayo kwindalo esingqongileyo ngeendlela ezimnandi. Izityalo zingasetyenziselwa ukwandisa ukufuma okungaphakathi, ukunciphisa ingxolo, indawo engathandekiyo, kunye neqondo lobushushu kwigumbi ngokufaka ifestile ekhanyayo, enelanga, utshilo u-Altman. Ngaphambi kokuba ugcwalise indawo ngefanitshala kunye nezixhobo, thatha ixesha lokucinga malunga nendlela ofuna ukuziva ngayo kwelo gumbi kunye nendlela izityalo ezinokukunceda ngayo ufezekise loo vibe.
THENGA INDAWO YOMHLABA WEPALM
3 ... kwaye nditsho nokukhulisa impilo yakho yengqondo. URyanJLaneImifanekiso kaGetty
Izindlu zendlu zinokwenza imimangaliso kwimpilo yakho yengqondo. Umzekelo, xa kufakwe izityalo ezitsha ezingama-28 kwiindawo eziqhelekileyo zeziko lokubuyisela intliziyo kunye nemiphunga eNorway, abaguli baxele ukonyuka okukhulu kwimpilo-ntle emva kweeveki ezine xa kuthelekiswa nezigulana ezazingenalo uhlaza. ukufunda ifunyenwe. Sivela emhlabeni phakathi kwengca ejikelezwe yimithi nezityalo, utsho UJohn Beirne , HTR, umyaleli kunyango lwezifundo zeHorticultural Igadi yeZityalo zeNew York kunye nentsumpa yokulima kwi IWillowwood Arboretum . Akumangalisi ukuba basenze sizive sisekhaya-kuba i-eon bayondle imizimba yethu kunye nemiphefumlo yethu.
INDAWO YOKUTHENGA ITHENGA IPHOTHOS
ungayifumana njani incasa yakho kwakhona
4 Uya kuziva uluvo lokuphumelela. Luis Alvarez umfanekiso obambe indawoImifanekiso kaGetty
Kwenye ukufunda , xa abahlali abakwindawo yokuhlala encedisayo bafaka amanzi kwizityalo kwaye bafunda indlela yokuzinyamekela ekhaya, umgangatho wabo wobomi waphucuka. Abaphandi bathi kungenxa yemvakalelo yokufezekiswa okanye ubudlelwane abantu baziva ngezityalo zabo (abanye bathi bathetha kwaye babaculela).
Nangaliphi na ixesha umntu ethatha ubunini bento ngokuthi ayenze ngokwakhe, bakhupha ikratshi ngokufezekisa, utshilo uGwenn Fried, umphathi we Unyango lweHorticulture e-NYU Langone's Ukuvuselelwa kweRusk . Kumava am, nabani na otyala into uya kuyikhathalela ngakumbi kwaye ayondle- ukukwazi ukuyondla yinxalenye yamava omntu kwaye kuzisa uvuyo. Ke yiya phambili ubhinqe iBeyonce kwigumbi lakho lokuhlala ngomhla wokunkcenkceshela-i-fern yakho ayizukugweba.
5 Baza kukunceda ulibale ngoxinzelelo. golubovyImifanekiso kaGetty
Ukubumba izityalo kunye nokuzigcina zikunika ithuba lokulibala malunga nengxaki, izinto zoxinzelelo ezinokuthi ziqhubeke ebomini bakho, kwaye ujonge kule ilapha-ngoku, utshilo u-Altman. Ngelixa oku kuluncedo kuthi nakwimpilo yethu yengqondo, isityalo siyalonwabela olu nonophelo, kwaye sikhula ngcono kwaye sikulungele ukubonelela ngezibonelelo zomzimba.
Ukuba umtsha egadini, uAltman ucebisa ngokuqala ngee-succulents ukuba unegumbi elinefestile elifumana ukukhanya okuninzi okanye iipilodendron kwigumbi eliphakathi elinokukhanya okuphakathi. Ukuba awuphumelelanga ngesityalo okokuqala kwaye siyafa, kulungile-zama nje kwakhona, utsho. Abona balimi balungileyo kunye nabalimi bezityalo ezifundwayo bafunda kwiimpazamo zabo kwaye ngazo zonke iimpazamo ezikhulayo ezenziweyo kukho isifundo ekufuneka sifundwe.
Iivenkile ukutyala iimbiza
6 Imveliso yakho inokunyuka. IWestend61Imifanekiso kaGetty
Ukuhlala okumnandi kwidesika yomntu osebenza naye kungamnika ukonyusa ingqondo emsebenzini. Imveliso yabasebenzi inyuke ngepesenti ye-15 emva kokuba izityalo zazisiwe kwi-ofisi eyayingenanto ngaphambili, kwi ukufunda yiYunivesithi yase-Exeter. Izityalo zazikhe (kwaye zisafuneka) ukuze kusinde abantu, utshilo u-Altman. Namhlanje, olu nxibelelwano lungaphakathi kubo lunokujongwa ngokuncitshiswa koxinzelelo kunye nokuphucula ukuzola kunye nokuba sempilweni, ethi yona ibe nefuthe kubuchule bomntu bokuyila kunye nokugxila kwimisebenzi.
Kwimeko yenqaku: Abafundi beKholeji abenza imisebenzi enzima yokuqonda kwiofisi enezinto eziluhlaza babenexesha elide lokuthathela ingqalelo kunabo babeseofisini ngaphandle kwezityalo, ngokwe ukufunda ipapashwe kwi Ijenali yeNzululwazi yezeNdalo .
7 Banceda ukukhuthaza ukuphilisa. Emilija ManevskaImifanekiso kaGetty
Ubuhlobo bethu obusondeleyo nezityalo bunceda abantu ukuba bachache ekuguleni okanye ekonzakaleni ngokukhawuleza, utshilo u-Altman. Ngokuzijikeleza zizityalo, siyakwazi ukwenza indawo yendalo, indawo yokuhlala apho siziva sikhuselekile kwaye sikhuselekile.
Inyaniso, abaphandi kwiYunivesithi yaseKansas State yafumanisa ukuba izigulana ezinezityalo kumagumbi azo zifuna amayeza amancinci eentlungu, zinexinzelelo lwegazi kunye nokubetha kwentliziyo, kwaye beziva benxunguphalo kunye nokudinwa xa bechacha kutyando kunezigulana ezingenaluhlaza emagumbini azo. Ezinye izityalo zide zibonelele ngezibonelelo zokuphilisa ngokwasemzimbeni. Njengokuba, ialoe vera inokusetyenziselwa Philisa ukutshiswa lilanga kunye nolunye ulusu olucaphukisayo.
THENGA ALOE VERA ISITYALA
Umsebenzi olungileyo wokulahla amanqatha esisu
8 Izityalo zinokukhulisa nokunyanga. Imifanekiso ekhanyayoImifanekiso kaGetty
Ngokuhambelana naloo migca, ukukhula nokukhathalela izityalo kungadlala indima kwinkqubo yokubuyisela esesikweni yomntu kunye nengcali yezolimo. Unyango lweHorticulture yindlela yokusebenzisa izityalo ngaphakathi kwisicwangciso esilungileyo sokubuyisela impilo kunye nesicwangciso sonyango esibandakanya iingcali zokwenza kunye nokubeka iinjongo ezinokulinganiswa kumntu oza kufumana ukhathalelo ukuze afezekise, utshilo uBeirne. Iinjongo ekugqibeleni ziya kumnceda umntu oyise ubunzima, iingxaki, okanye izithintelo ezichongwe liqela lonyango.
Ngokwe- Umbutho wezonyango waseMelika , modality inokusetyenziselwa iingxaki zengqondo (ezinje nge PTSD ), Imicimbi yomzimba (njengokuphinda ufumane izakhono ezilahlekileyo), okanye imizabalazo yomsebenzi (ukusombulula ingxaki, umzekelo). Ke kwixesha elizayo xa ukhalaza ngokuba kufuneka unkcenkceshele izityalo zakho, cinga ngayo yonke into abakunika yona ngembuyekezo!
Inkulumbuso protein inyikima ukunciphisa umzimba
I-333 ingelosi enentsingiselo
apple cider iviniga ukunciphisa umzimba
Ithetha ntoni i-888 kuthando
yikristale eluhlaza eluhlaza